Duqeynta Xalane iyo tii Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Duqeynta Xalane iyo tii Dhuusamareeb
Waa laba dhacdo oo isku mida, mid waxay ka dhacday Dhuusamareeb xilli loo diyaar garoobayay shirkii Dhuusamareeb 4 ee fashilmay, midna waa maanta oo loo diyaar garoobayo shir kale oo kaas daba socda!
MUQDISHO, Soomaaliya - Dhacdooyin isku eg ayaa laga diiwaan galiyay taariikhda siyaasadaha is diidan ee dalka Soomaaliya, madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa isagoo ka hadlaya dhacdadii weerarka Dhuusamareeb waxa uu yiri "Waxaad mooddaa in madaxweyne Farmaajo uu wax ka ogyahay qolyaha soo tuura Hoobiyayaasha, isagoo ula jeeda Al-Shabaab"!
5 -tii Febaraayo ee sanadkan waxaa shir uu ka furmi lahaa magaalada Dhuusamareeb, hayeeshee xilli saq-dhexe ayaa laga war helay dhawaqa madaafiic culus oo la garan waayay waxa ay yihiin, goor dambe ayaa lagu baraarugay in kooxda Al-Shabaab ay weerar hoobiyayaal ah ku soo qaadeen magaalada Dhuusamareeb, xilli lagu waday inuu furmo shirkii Dhuusamareeb 4 kaasoo ugu dambeyntii fashil kusoo dhammaaday!
9 -ka Maarso oo ku beegan maanta waxaa barqo cad hoobiyayaal lagu garaacay xerada Xalane, xilli ay halkaas soo gaareen mas'uuliyiin ka qeyb gali lahayd shir lagu wado maalinta berri ah in uu ka furmo magaalada muqdisho, gaar ahaan xerada aadka loo ilaaliyo ee ajaanibta oo dhan ay ku sugan yihiin ee Xalane.
Weerarada oo xilliyo kala duwan dhacay balse waxay kusoo beegmay furitaanka munaasabado isku mida kuwaasoo ah Shir lagu doonayo in lagu dhammeeyo arrimaha muranka badan ee doorashooyinka Soomaaliya.
Xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa isagoo ka hadlaya arrintan waxa uu yiri ma waxaa rumoobeysa arrintii ahayd in ay wada shaqeeyaan laba shabaab, mise dowladda ayaa ku garaacday hoobiyayaal Xerada Xalane? madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa horay u codsaday in shirka lagu qabto meel ammaan ah, si gaara ayey u dalbadeen in xerada Xalane lagu qabto shirka.